နေ့: စက်တင်ဘာလ 28 2019
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်သိပ္ပံရေးရာအဖွဲ့များ, Konutkent ရပ်ကွက်ရှေ့ /7အလုပ်လုပ်ပေါ်တွင်ဝင်ပေါက်တံခါးကိုအပြီးအလှည့်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးတစ်ခုဉမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့် Capital ကိုတက္ကသိုလ် 24 ၏Yaşamkentရပ်ကွက် input ကိုလမ်းဆုံအတူ။ မြို့တော်မြူနီစီပယ်, [ပို ... ]
တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor, Bilkent စီးတီးဆေးရုံနှေး, ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းလုပ်ဂတိတော်တို့ကိုတဦးဘတ်စ်ကားလိုင်းထားရန်ညွှန်ကြားချက်ကိုပေး၏။ ဇူလိုင်လ 25 "112 လူမြိုးတစျမြိုး-Bilkent စီးတီးဆေးရုံ (Express ကို)" ဘတ်စ်ကားလိုင်းဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်အတ္တ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, [ပို ... ]
Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Vahap ရွေးချယ်မှု, သင်္ဘော 30 ၏ Mersin ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ဒုတိယအခန်းထဲမှာဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်ထူးဖေါ်ပြခြင်းတူရကီရဲ့ရေကြောင်း။ သူနှစ်မြောက်ပွဲအစီအစဉ်သို့တက်ရောက်သည်။ တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကဟိုတယ်တွင်ကျင်းပသည့်ဧည့်ခံမှာစကားပြောမယ့်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုရွေးချယ်ပါအဏ္ဏဝါနှင့် [ပို ... ]
Isparta အဓိကဆုံတစျခုဖွစျသညျနှင့်ရေအိုင်, Burdur ပြီးစီးခဲ့နှင့်အလုပ်ဟောင်း Merko အချက်ပြအသွားအလာလမ်းဆုံများတွင်ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ်နှစ်ဦးစလုံး၏ညှနျကွားတွင်တည်ရှိသည်သငျ့သညျ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးများကညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ Isparta Isparta မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ŞükrüBaşdeğirmen [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနHaydarpaşaရထားဘူတာစာချုပ်များတောင်းဆိုဖို့ဖြစ်တယ်! : နုအချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုဖော်ပြ TCDD Sirkeci နှင့်Haydarpaşaဘူတာပု IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာဖြစ်ရပ်များအတွက်ငှားဖို့အောက်တိုဘာလ4တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည် [ပို ... ]
စနစ်တောင်ကိုရီးယားရဲ့မြို့တော်နှင့် ပတ်သက်. လေ့လာတွေ့ရှိချက်အောင်ရထားလမ်းသမ္မတ Ekrem ရထားလမ်းစနစ်များအကြောင်းကိုကျယ်ပြန့်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန် "ဆိုးလ်သည်အနန္တတန်ခိုးရှင်ထံသို့ ဝင်. , ငါတို့အနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုခိုင်မာစေရန်ခေတ်မီနည်းပညာ၏ကိုယ်စား, တောင်ကိုရီးယားရဲ့မြို့တော် Seul'd ။ ရထားလမ်းစနစ်များ [ပို ... ]
Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လယ်ပြင်၌အစေခံရန်အမျိုးသမီးများစုစုပေါင်း 100 စုဆောင်းမှုကြော်ငြာများအတွက်ထင်ရှား။ , Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Vahap ရွေးချယ်မှု, ဧည့်ခံပေါ်တွင်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများအပေါ်လေ့လာမှုများစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ရွေးချယ်မှု "Mersin ငါအများကြီးပိုပြီးလှပဖြစ်ချင်တယ်။ [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့ရဲ့လိုအပ်လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, ရပ်ကွက်အတွင်း Wish Tavşantepe superstructure အလုပ်ပေါ် မူတည်. Izmit မြို့လမ်းပေါ်မှာအမှုကိုပြုလျက်ရှိသည်။ သိပ္ပံရေးရာအဖွဲ့ Dilek လမ်း Turan အားဖြင့် [ပို ... ]
ယင်း၏တာဝန်အောက်မှာ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခုံးကျော်တံတား, မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားများ၏အသုံးပြုမှုကိုအဘို့ကြီးသောအရေးပါမှု၏ဖြစ်ကြသည်။ ဓာတ်လှေကားနှင့်စက်လှေကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမှုဆောင်ဒါဟာမြေပေါ်တွင်လည်းနိုင်ငံသားများ၏နှစျသိမျ့တိုးပွားစေပါသည်။ Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအဆောက်အအုံ [ပို ... ]
အချိန်ကြာမြင့်စွာဆွေးနွေးကြသည် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းသည်သုံးသက်ရှင်ပြတ်ရွေ့၏လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိထင်ရှား။ , အငြင်းပွားဖွယ် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းသည်ငလျင်အန္တရာယ်များ၏လမ်းကြောင်းကိုအတွက်ဖြစ်တို့အားထင်ရှားလေ၏။ ၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး 2014 Kucukcekmece စီမံကိန်းတွင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အတွက် [ပို ... ]
Başiskele, ရေအိုင်များနှင့် Karamursel နှင့် Izmit D-100 မှ Salim Dervişoğluလမ်းဆဲလ်အသွားအလာမှသက်သာရာရစေရန် pauses ကျင်းပခဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းဦးဆောင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အသုံးပြုမှုကို။ ပဌမနေ့၌အသစ်ဆောက်လုပ်ထားမိုဘိုင်းအသွားအလာရပ်တန့်အပေါ်ရပ်ရွာ Center ကရပ်တန့် [ပို ... ]
စက်ရုပ် applications များနှင့်လက်တွေ့ဥပမာ, အောက်တိုဘာလနှင့် 1-35wow ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာအကြားစက်ရုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်ကုန်စည်ပြပွဲစင်တာတွင် ပတ်သက်. စက်မှုလုပ်ငန်းများ digital အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ။ အတူတူနေတဲ့အနာဂတ်ပြီးတာနဲ့။ ကမ္ဘာ့အနာဂတ်ပုံဖော်ကြောင်းစက်ရုပ်ပေမယ့်စီးပွားရေးလောက၏အနာဂတ် [ပို ... ]